မုံရွာမြို့လယ်ရှိ ပညာ့အလင်း ခေတ်မီ စာကြည့်တိုက်ကို အဆင့်မြှင့်၍ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် အဆို စစ်က?? - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ မေ ၂၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့ ရုံးကြီးရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ဘူတာလမ်းထောင့်ရှိ ပညာ့အလင်းခေတ်မီစာကြည့်တိုက်အား စစ်ကိုင်းတိုင်းဂုဏ် ဆောင် အဆင့်မြင့်စာကြည့်တိုက်အဖြစ် မွမ်းမံပြီး ပြန်ဖွင့်ပေးရန်အဆိုမှာ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းသူ မုံရွာမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အမာကြည်က ပြောကြားသည်။
ယင်းအဆိုကို မေ ၂၉ရက်က ကျင်းပသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ခုနစ်ရက်မြောက် နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွှတ် တော်တွင်ဆွေးနွေးရန် ကန့်ကွက်သူရှိသဖြင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်စေခဲ့ရာ မဲ ပေးခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၈၇ဦးအနက် အဆိုကို ထောက်ခံသူ ၃၂ဦး၊ ကန့်ကွက်သူ ၅၂ဦး၊ ကြားနေ သုံးဦးရှိပြီး ကန့်ကွက်သူများသောကြောင့် အဆိုကို လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည် မဟုတ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့သည်။
”အဆို ရှုံးနိမ့်လို့ အထူးစိတ်မ ကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ပြည်ထောင်စုကိုတော့ ဆက်တင်သွားနိုင်အောင်လုပ်မယ်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာဆီယံစာကြည့်တိုက်မှူးများညီလာခံမှာလည်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ စာပေသမိုင်းနဲ့လူ့သဘောသဘာဝအကြောင်းချစ်မြတ်နိုးစေဖို့ စာကြည့်တိုက် တွေ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်”ဟု အဆိုရှင် ဒေါ်အမာကြည်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ စာကြည့်တိုက်နောက် ကျောရှိ အခန်းများကို ယခင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဇေယျာ ပဒေသာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်နှစ်ခုတို့မှ တိုင်းစည်ပင်တွင် တစ်လနှစ်သိန်းဖြင့် ငှားရမ်းအသုံးပြုနေရာ ရရှိသည့်ငွေကြေးနည်းပါးသဖြင့် ငွေပိုပေးနိုင်သူအား ပြန်ငှားရန် တိုင်းအစိုးရက တင်ဒါကြေညာပြန် ခေါ်ခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ပညာ့အလင်းစာကြည့်တိုက်အား ပုဂ္ဂလိကသို့ မငှားဘဲ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး စာကြည့်တိုက်အဖြစ်ထားရန်ကို မြို့ခံအလွှာစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စာကြည့်တိုက်ရေရှည်တည်တံ့ ရေးကော်မတီကလည်း တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရထံ စာတင်ထားကြောင်းသိရသည်။
မိုးကုတ်မြို့ စိန်အင်းကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှု ကျူးလ??
စပါးအသင်း၏ ခံစစ်အားနည်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူသွားမည်ဟု စီရော်နယ်ဒို ကြုံးဝါး